Magaalada Nairobo oo si weyn looga xusey munaasabada 1-da Luulyo (Sawiro) – SBC
Magaalada Nairobo oo si weyn looga xusey munaasabada 1-da Luulyo (Sawiro)
Munaasabad si qurux badab loosoo agaasimay laguna xusayay 1-da lulyo oo ah maalinta xornimada gobollada koofureed iyo midowgii labada gobol ee koofur iyo woqooyi ayaa waxaa habenki xalay ahaa lagu qabtay Barxada Sir Ali Muslim club ee magalada Nairobi.
Munaasabadaasi aadka u heer sareysay oo ay soo agaasintay Hey’ada SYAO ayaa waxaa kasoo qeyb galay in kabadan 9,000 oo qof oo isugu jira dhamaan bulshada qeybaheeda kala duwan sida haweenka, dhalinyarada, caruurta iyo waayeelka intaba
Siyaasiyiin ay kamid ahaayeen Ismacil Hurre Buubaa , Max’ed Max’ud Guled (Gacma dheere) tiro xilibaano ah ee Nairobi ku sugan iyo wakiilo ka kala socda bulshada qeybaheeda kala duwan.
Waxaana goobta heeso wadani ah ka qaadayay in kabadan 40 fanaan oo isugu jiray kuwii hore iyo jiilka hada ayna ugu cad cadaayeen Ahmed Naji, Shumey, Daacad, Sahra Mire , Xasan Cagaran, Falis iyo fanaaniin kale oo iyagu ka haqabtiray bulshadii ka soo qeybgashay munasabada suugaan wadani ah, sidoo kale waxaa qeybka ahaa riwaayado iyo ciyaarta hidaha iyo qoobka ciyaarka Maryan C/lle iyo asxaabteda.
Goobta ay munaasabada ka dheceysay oo eheyd mid si aad ah looga shaqeeyay bilicdeeda ayaa waxaa ka muuqanayay halku dhigyo qiira galiyay dadka iyo shaashado waa weyn oo ay bulshada ka daawanayeen waxa aga gaarkooda ka soconayay.
Heeso iyo damaashaadka inta uu socday ayaa waxaa daqiiqado gaaban la hadlay shacabka masuuliyiin iyagu ka soo qeyb galay dabaaldaga.
Maxamed Ibrahim Cali gudomiyaha SYAO ayaa u mahad celiyay dhamaan ka soo qeyb galayaasha iyo madaxii qaban qaabada xaflada Shiine akhyaar gudomiyaha waayaha cusub, isagoo xusay in SYAO ay wax waliba ay u hurtay sidii ay munaasabd quruxbadan ugu soo bandhigi lahaayeen shacabka soomaaliyeed, waxa uuna u rajeeyay umada soomaaliyeed dabaal dagan kiisa kale in alle Nabad iyo xasilooni lagu wada gaarsiiyo.
Shiine C/hi Cali (Shiine akhyaar) gudomiyaha kooxda waayaha cusub oo isna goobta hadalo kooban ka jeediyay ayaa umahad celiyay dhaman mulshada, isagoo xusay qaabka uu u qaban qaabiyay iyo mudada uu ka shaqeynayay sidii uu bulshada ugu soo bandhigi lahaa munaasabad quruxbadan.
Shacabkii ka soo qeyb galay munaasabada oo iyagu xiiso balaaran u qabay calan saar isla markaana sugi weysnaa inta laga gaarayay ayaa markii ay saacada is dul taagtay 12:00 am waxaa ay mar qura wada qaadeen astaanta calankeena iyagoo goobtana lagu saaray Calankena buluga ah xidigta shanta geesna ay dhexda kaga taalo.
Mar aan Microphone-ka la dhex marnay shacabkii ka soo qeyb galay Munaasabada ayaa waxa ay si isku mid ah ku tilmaameen xafladan tii ugu shacbiyada iyo bilicda wanaagsaneyd oo ay abid ka qeyb qaataan.
Munaasabada ayaa waxa ay idlaatay iyadoo wali xiiso balaaran la isku qabay isla markaasi ay baaqi ahaayeen fanaaniin badan waqtigana uu ahaa waabarigii.